Zimbabwe's resilient women: How I reported on them
0	January 1, 2018 2:00 AM
Many of the roughly 16 million people in Zimbabwe continue to struggle with access to electricity, which has been worsened by economic challenges.
Source: Zimbabwe’s resilient women: How I reported on them
Juliet Chasamuka, pictured here wearing a red dress, is six-months pregnant while waiting for a prenatal at the Mazuru clinic in rural Zimbabwe.
Many of the roughly 16 million people in Zimbabwe continue to struggle to access electricity. Energy challenges have worsened, due to economic challenges the country has been grappling with since the early 2000s. Zimbabwe’s economy continues to experience cash shortages,exacerbated by El Niño weather patterns that have rocked the country for the past two farming seasons (2014–2016).
Solar energy is used to power the Mazuru clinic in the town of Masvingo, Zimbabwe.